Maxaa ka jira wararka ah in la badalay illaaladii madaxtooyada K/ Galbeed? - BBC News Somali
Maxaa ka jira wararka ah in la badalay illaaladii madaxtooyada K/ Galbeed?
Waxaa la shaaciyay war ku saabsan in kulan deg deg ah uu xalay madaxweynaha wakhtigiisu sii dhammaanayo ee maamulkaas Shariif Xasan Sheekh Aadan la yeeshay lataliyeyaashiisa dhinaca ammaanka, kaasoo laga soo saaray go'aanka lagu baddalayay illaalada madaxtooyada oo la sheegay in isla xalayba la dhaqangaliyay.
BBC-da ayaa xiriir toos ah la sameysay wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed oo loo yaqaanno 'Xasan Eelaay', wuxuuna beeniyay warkaas.
Faragalinta arrimaha amniga ee Koonfur-galbeed iyo Puntland
"Waa macluumaad been abuur ah oo ay faafinayaan dadka mucaaradka ku ah madaxweyne Shariif Xasan, wax ka jirana ma laha. Kaliya waxay doonayaan iney khalkhal ku galiyaan ammaanka magaalada" ayuu yiri.
"Wax isbaddal ah lama sameynin. saraakiishii iyo ciidamadii horay u joogay ayaa wali gacanta ku haya amaanka madaxtooyada, ma garanayo meesha laga keenay warkaas been abuurka ah".
Waxa uu sidoo kale sheegay in uu si xowli ah u socdo ol'olaha doorashada, maadaama uu wakhtiga soo dhawaaday.
"Dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed wali way socdaan siyaasiyiintana kulamo joogto ah ayay yeelanayaan, maalin kastana waxaa soo xoogeysanaya xamaasadda ku saabsan doorashada".
Musharixiinta xilka madaxweynenimo qaarkood ayaa la sheegay in ay leeyihiin illaalo ciidan oo xoog badan, kuwaas oo iyaga ku heeb ah, taas oo laga yaabo in isbadalka madaxtooyada ay horseedi karto, waaba haddii ay jirto, sida ay BBC-da u sheegeen illo wareedyo muhiim ah.
Dhanka kale, qaar ka mid ah odayaasha beelaha dega Koonfur Galbeed ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in ay farogalin ku hayso doorashada madaxweynenimo, waxayna sheegeen in ciidan iyo lacago ay keentay magaalada Baydhabo si ay dhanka kale ugu rogto codadka dhacaya.
Sidaas oo ay tahay waxaa iyana jira eedeymo kuwaas kasoo horjeeda oo sheegay in maamulka uu isna ka shaqaynayo sidii markale dib loogu dooran lahaa madaxweynaha hadda jooga.